आज सेन स्मृति दिवस, को थिए सेन, कसरी गरिएको थियो हत्या ! - Ratopati
आज सेन स्मृति दिवस, को थिए सेन, कसरी गरिएको थियो हत्या !
आस्था केसीले तयार पारेको एक रिर्पोट
हाम्रा गीतहरुमा प्रतिबन्ध लगाउँदै
तिमी भन्छौ, गाउ न त गाउ
हामी भने त्यहीं गीत गाइरहन्छौं …..।
आज जेठ १३ गते पत्रकार तथा साहित्यकार महान शहिद कृष्ण सेन इच्छुकको १४ औं स्मृति दिवस देशैभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैँछ । जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेलामा महेन्द्र पुलिस क्लबका तत्कालिन डिआइजी अमरसिंह शाह, तत्कालिन नगर प्रहरी प्रमुख बिक्रम सिंह थापालगायतको टोलीले २०५९ जेठ ६ गते गिरफ्तार गरी हिरासतमै चरम यातना दिएर सेनको हत्या गरेका थिए ।
सेन हत्याको १४ बर्ष पुगिसक्दा पनि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुन सकिरहेको छैन । हत्यारालाई कार्वाही हुन सकेको छैन । सेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार सेनको स्मृतिमा सरकारले कृष्णसेन स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । त्यसैगरी क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपालले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेर हरेक बर्ष क्रियाशिल पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । त्यसैगरी अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघले पनि अधिकांश जिल्लामा सेन स्मृति साहित्य पुरस्कार स्थापना गरेर सेनलाई सम्झिँदै आएको छ ।
निष्ठा र आदर्शको लागि राजनीति तथा पत्रकारिता गरेका सेन आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जनवादी आस्थाका केन्द्र बन्न पुगेका छन् । पटक–पटक प्रतिक्रियावादीका जेल र हिरासतमा बसेका सेन आफ्नो आदर्श जस्तै सादा जीवन जिउने गर्थे ।
अहिलेको सन्दर्भमा सेनलाई कसरी सम्झिने भन्ने प्रश्नको जवाफमा सेनका सहकर्मी तथा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले रातोपाटीलाई यसरी बताए ।
पद प्रतिष्ठा र नामभन्दा टाढाको आन्दोलनको नाम कृष्ण सेन इच्छुक हो । एउटा पत्रकार, साहित्यकार र राजनीतिज्ञक बाहेक कृष्ण सेन इच्छुक एउटा नागरिक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सँधै पद, प्रतिष्ठा र लाभको राजनीतिभन्दा माथि बस्नुहुन्थ्यो । निष्ठा, आदर्श र जनताको मुक्तिको लागि उहाँको सपना थियो ।
२०४१ सालमा पार्टी एकता महाधिवेशन हुँदा हामीले उहाँलाई राप्ती अञ्चलबाट केन्द्रिय कमिटीको सदस्यको लागि सिफारिस गरेका थियौं । तर उहाँले केन्द्रिय समितिमा बस्न अस्विकार गर्नुभएको थियो । म काम गर्छु, काम गर्नको लागि मलाई कुनै जिम्मेवार पदमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर सेनले पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
अहिले पार्टीभित्र पदको लागि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । यतिबेला हामी माओवादी नेता, कार्यकर्ताले सेनबाट एउटा आदर्शको राजनीति सिक्नुपर्दछ । रुपान्तरणको राजनीति गर्नेले उहाँलाई गुरु मानेर जानुपर्छ ।
अहिलेको समयमा शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइते अपाङगलाई वेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ, तर हामीले इतिहासलाई दोहोर्याउनु हुँदैन । इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अबका दिनमा शहीदका सपना पुरा गर्न लाग्नुपर्छ । सपनाहरु कहिले पनि मर्दैनन् । हो हामीले कहिल्यै नमर्ने सपना पुरा गर्नको लागि अबका सबै कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
चरम यातनाका कारण जेठ १३ गते बिहान ११ बजे सेनको प्राण गइसकेको थियो । उनको शवलाई बोरामा पोको पारेर सरकारी गाडीको रातो नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी सेतो बनाउन लगाएर बा१च ६०१७ नम्बरको सेतो रङको पिकअप भ्यानमा सेनको शव महेन्द्र पुलिस क्लवबाट चुपचाप बाहिर निकालिएको थियो । सई, असईलगायतको एउटा टोलीले सोही दिन रातारात सेनको शव आर्यघाटमा लगेर गुपचुप रुपमा दाहसंस्कार गरेको थियो ।
यसरी गरिएको थियो सेनको हत्या
महेन्द्र पुलिस क्लबको जुडो हलछेउ माथिल्लो घरको पहिलो तल्लाको भिआइपी कोठामा २०५९ जेठ १३ गतेका दिन बिहान ११ बजे डोरीले पछाडी हात बाँधेर सेनलाई लडाइएको थियो । उनी वरिपरि सैनिकबर्दी लगाएका चारजना उभिएका थिए । बर्दीधारी मध्येको एक जनाले उनलाई यो देश कस्को हो भनेर सोधेको प्रश्नमा सेनले यो जनताको देश हो भनेर जवाफ दिएका थिए ।
तत्कालै बर्दीधारी प्रश्नकर्ता उनीमाथि जाइलागेको थियो । जनताको होइन यो देश राजाको हो भन्दै उसले सेनको निधारमा मुक्कामाथि मुक्का बर्षाएको थियो । तँ पनि ठकुरी, राजा पनि ठकुरी र म पनि ठकुरी । बर्दीधारीले भयंकर अट्टहास गर्दै भनेको थियो । ठकुरी राजाको विरुद्धमा लाग्ने तँ को होस् ।
बर्दीधारीलाई मानवताको कुनै नैतिकताले पनि छुन सकेन । राजाको शासन जोगाउने ठेक्का लिएको उसले पत्रकार तथा साहित्यकार कृष्णसेन इच्छुकलाई कुटेरै हत्या गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको तत्कालिन डिआइजी अमरसिंह शाहले चरम यातना दिएर सेनको हत्या गरेको आज १४ बर्ष पुग्दैछ ।
२०५९ सालको जेठ ६ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट समातिएका सेनलाई हप्ता दिनसम्म चरम यातना दिएर महेन्द्र पुलिस क्लबमै राखिएको थियो । उनी गिरफ्तारीमा परेको भोलीपल्ट राती २ बजेसम्म सेनलाई अरु सहकर्मी साथीसँगै राखिएको थियो । चरम यातनाका कारण सेनका हातखुट्टा भाँचिइसकेका थिए । उनी उभिन सकिरहेका थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि दुईजना प्रहरीलाई समात्न लगाएर तत्कालिन नगर प्रहरी इन्चार्ज बिक्रम थापाले भित्तामा अड्याँउदै सेनलाई लगातार बुटले हानिरहेको थियो ।
समाचार स्रोतका अनुसार चरम यातनाका कारण जेठ १३ गते बिहान ११ बजे सेनको प्राण गइसकेको थियो । उनको शवलाई बोरामा पोको पारेर सरकारी गाडीको रातो नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी सेतो बनाउन लगाएर बा१च ६०१७ नम्बरको सेतो रङको पिकअप भ्यानमा सेनको शव महेन्द्र पुलिस क्लवबाट चुपचाप बाहिर निकालिएको थियो । सई, असईलगायतको एउटा टोलीले सोही दिन रातारात सेनको शव आर्यघाटमा लगेर गुपचुप रुपमा दाहसंस्कार गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका हालका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री थिए । महेन्द्र पुलिस क्लबमा चरम यातना दिएर ज्यान लिएपश्चात तत्कालिन सरकारका गृह प्रवक्ताले सेनको हुलिया दिएर गोकर्णको जंगलमा दोहोरो भीडन्तमा सेन मारिएको झुटो विज्ञप्ती निकालेका थिए ।
को हुन सेन ?
कृष्ण सेन इच्छुक जनदिशा दैनिकका प्रधान सम्पादक थिए । इच्छुक नेपालको प्रगतिवादी साहित्यिक र सांस्कृतिक आन्दोलनमा समर्पित व्यक्तित्व थिए । शब्द र कर्मबीचको एकत्व उनको जीवनको एक महत्वपूर्ण र अनुकरणीय पक्ष थियो । उनले आफूले आत्मसात गरेको आदर्शका निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान दिए ।
वि.सं. २०१३ मा भारतको देहरादुनमा जन्मिएका सेनको पुर्खयौली घर अर्घाखाँची जिल्लाको जलुकेमा पर्दछ । जलुके दाङ जिल्लाको पुरानो शहर भालुवाङको नजिकै रहेको छ । उनले प्रारम्भिक शिक्षा दिक्षा दाङको लालमटियामा लिएका थिए ।
सामान्य लाहुरे परिवारमा जन्मिएका इच्छुकले आफ्नो काव्य यात्राको थालनी दाङबाट प्रकाशित हुने ‘युगबोध’ समाचारपत्रबाट गरेका थिए । उनको व्यक्तित्व बहुआयामिक थियो । उनी पत्रकार र साहित्यकार मात्र होइन शिक्षक, र सचेत राजनीतिकर्मी पनि थिए । उनी एउटा जनपत्रकार र जुझारु क्रान्तिकारी योद्धा थिए । मूलतः उनी नेपाली प्रगतिवादी काव्य फाँटमा आफ्नो स्थान निर्माण गर्न सफल रहे । उनी आफ्नो व्यक्तित्वको यस प्रमुख पक्षप्रति सधैँ सचेत पनि आफ्नो व्यक्तित्वको विविधता प्रति सधैँ सचेत रहे । परिणामतः उनको काव्य व्यक्तित्व खुम्चिएन, त्यो अझ फराकिलो र उर्वर हुँदै गयो । आफ्नो अढाई दशक लामो काव्य यात्रामा इच्छुकले नेपाली प्रगतिवादी काव्य फाँटलाई समृद्ध गर्न उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् ।
यस्तो छ सेनको संक्षिप्त परिचय
जन्म : वि.सं. २०१३ कातिक ३
जन्मस्थान : भारतको देहरादुन
आमा : भीमकुमारी सेन
बुबा : यमबहादुर सेन
पत्नी : तक्मा केसी
छोरी : समीक्षा केसी
शिक्षा : बी.एड, एम.ए
क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, नेकपा (माओवादी)
प्रकाशित कृतिहरु :
बन्दी र चन्द्रागिरी (२०५७)
कलम साहित्यिक त्रैमासिक,
जनदिशा दैनिक, योजना आदि
प्रेस सेनानी पुरस्कार (२०६५) मरणोपरान्त
बन्दीगृह (१ वर्ष)
शहादत : वि.सं. २०५९ जेठ १३
(महेन्द्र पुलिस क्लबको हिरासतमा)
शहादतपछि प्रकाशित कृतिहरु :
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ स्मृति ग्रन्थ
इच्छुक रचनावली भाग १,२,३
कवि इच्छुक कविताका सन्दर्भमा
आस्था र निष्ठाका शतिसाल इच्छुक ।